‘सामाजिक सेवा पहिलो प्राथमिकता’ -::DainikPatra
लायन्स क्लब अफ बुटवल स्टार्सको आयोजनामा यही माघ २७ गते हुने ग्राण्ड फ्लोसिप प्रोग्राम एरिया फोरको विषयमा कार्यक्रम संयोजक एमएल पाण्डेसँग दैनिक पत्रकर्मी आचार्य प्रदीपले गरेको कुराकानीको केही अंश
फोलेसिप कस्तो कार्यक्रम हो ?
लायन्स क्लबले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । त्यही अनुरूप पहिलो पटक ग्राण्ड फोलोसिप प्रोग्राम एरिया फोर गर्दै छौँ । लायन्सका अन्य कार्यक्रममा सानो तहदेखि ठूलो तहसम्मका व्यक्तिलाई एकै कार्यक्रममा राख्न नसकिने भएको हुँदा यो कार्यक्रममा सबै तहका लायन्सहरूको उपस्थिति रहने छ । यसमा नयाँ व्यक्तिहरूलाई लायन्समा प्रवेश गराउने कार्य पनि हुने छ । संगै पुराना व्यक्तिहरूलाई लायन्सका विभिन्न नयाँ कुराहरूको बारेमा पनि जानकारी दिने छौँ । लायन्सको बारेमा धेरैलाई थाहा त छ तर पनि यसको क्रियाकलाप तथा महत्वको बारेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यस कारणले पनि यो कार्यक्रमको विशेष महत्व रहेनछ । हाम्रो यस कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणको रूपमा लाएन्सका अन्तर्राष्ट्रिय डाइरेक्टर सञ्जय ढकाल आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँले लायन्सको बारेमा स्थापनाकालदेखिको बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ । संगै नयाँ मेम्बरलाई स्वागत पनि गर्नुहुने छ । यस कार्यक्रममा परिवारसंगै तथा बच्चाबच्ची पनि लिएर उपस्थित हुन सकिनेछ ।
एरिफा फोर भनेको के हो ?
लायन्स क्लबको अन्तर्राष्ट्रिय ३२५ बि टु अन्तरगतको एरिया फोर(नवलपरासी, रूपन्देही, पाल्पा र कपिलवस्तु)मा रहेका क्लबहरूको संयोजनमा कार्यक्रम हुन लागेको छ । यस एरिया फोर अन्तरगत ६५ वटा क्लबहरू रहेका छन् भने १३ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष आबद्वता रहेको छ । नेपालमा ६ वटा एरियाहरू मध्यको हाम्रो एरिया फोर हो ।
बच्चाको लागि किड सो गर्ने भन्नुभएको छ, यसमा कस्ता क्रियाकलाप हुनेछन् ?
यो कार्यक्रममा बाबुआमासंग आएका बालबालिकालाई पनि मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित किड सो को आयोजना गरेका छौँ र डान्स तथा खेलकुद क्रियाकलापहरू पनि हुनेछन् । किड सो लाई मोटरवला मोबाइलले प्रायोजन गरेको छ । विजेता तथा उत्कृष्ट व्यक्तिलाई कम्पनीको स्मार्टफोन उपलब्ध गराउने छौँ , कार्यक्रम स्थलमा नै ।
कार्यक्रमको लागत कति रहने छ ?
बिहान ११ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म चल्ने कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि ३ लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने छ । हुन त मानिसको मनमा छ कि लायन्स महंगो क्लब हो । यसमा धेरै लागत लाग्छ भन्ने मान्यतालाई हटाउँदै पहिलो पटक २ सय ५० रूपैयाँमा टिकटको व्यवस्थापन गरेका छौँ । टिकटबाट हाम्रो २ लाख मात्र उठ्ने अनुमान गरेका छौँ । कार्यक्रममा बच्चाको प्रवेश शुल्कसमेत लिएका छैनौं ।
कति दर्शकको अपेक्षा छ ?
यो फ्लोसिप कार्यक्रम बुटवलको जनता मावि रामनगरमा हुँदैछ । विद्यालयमा १ हजार जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू अटाउन सक्छन् । यो संगै कार्यक्रमस्थलमा १५ वटा स्टलहरू पनि रहेका छन् । त्यहाँ चिया, माछाको मःम, सेलरोटीलगायतका परिकारहरू समेत उपलब्ध रहने छन् । यो संगै ब्याच, टाई लगायतका कुराहरू पनि बिक्रीको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ । कार्यक्रममा नाफा भएमा अनाथ तथा अपाङ्ग आश्रममा सहयोगको लागि पनि पहल गर्ने स्टल सञ्चालकहरूले प्रतिबद्वता जनाइसक्नु भएको छ । र, स्टल शुल्क पनि लिएका छैनौं ।
दैनिक पत्र संवाददाता /बुधबार, पुस १९, २०७४